Huawei G730 U30 Unbrick (Complete Guide) ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Saturday, August 20, 2016 AndroidHuawei, Huaweifirmware No comments
Huawei G730 U30 မှာ Recovery image verify failed! ပြပြီး fastboot mode ထဲပဲရောက်နေခြင်း Dload Firmware လုံးဝတင်မရတဲ့ ပြသနာ ကိုဖြေရှင်းနည်းပါ။
Credit to Firmware Fix
Credit to Sithumobile
အပေါ်ကပုံတိုင်း Recovery image verify failed! ဆိုရင်တော့ Fimware ကို Fastboot mode ကနေတင်လို့ မရသလို၊ SD card ထဲကို Dload Firmware ထည့်ပြီး လဲတင်လို့မရတော့ပါဘူး။အဲ bootloader ဖြည်ပီးသားဆိုရင်တော့ Fastboot ကနေ Firmware တင်လို့ရကောင်းရနိုင်ပါတယ်၊မရရင်တော့ အခုပို့ စ်က ဖြေရှင်းနည်းတိုင်း လုပ်ကြည့်ပေါ့
အဆင့် ၁ - လိုအပ်တဲ့ File တွေအရင်ဒေါင်းထားလိုက်ပါ
Download-G730-U30 M01006 Firmware China.zip 766.3MB
Download-Huawei Qualcomm Platform Multi-Download 1.0.0.2 (37.41MB)
နှစ်ဖိုင်လုံး ဒေါင်းပီးရင် Folder တစ်ခုထဲထည့်ပြီးဖြည်လိုက် ပါ
အဆင့် ၂ - Huawei_Qualcomm_Platform_Bootloader-Fastboot_Multi-Download-1.0.0.2 ဖိုဒါကို ဖွင့်ပါ QPBLFBML01.exe ကို ဖွင့်ပါ Manufacture ကိုရွေး next ကိုနှိပ်ပါ
XML ဖိုင်ကိုရွေးခိုင်းပါလိမ့်မယ်( Password ထည့်ခိုင်းနေရင် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Password ပေးလိုက်ပါ )၊အဆင့် ၁ မှာ ဖြည်ခိုင်းခဲ့တဲ့ ဖိုဒါထဲက Exe ဖိုဒါကိုဝင် 05+f+¦¦µ¦+ ဖိုဒါထဲမှာ ရှိတဲ့ XML ဖိုင်ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ
အောက်ကပုံလိုဖြစ်ပီဆိုရင်တော့ Scan&Download ကိုနှိပ်ပါ
အဆင့် ၃ - ဖုန်းကို 9008 mode ၀င်ပြီးကြိုးထိုးလိုက်ပါ ၊ 9008 ၀င်နည်းကို အောက်ကပုံမှာကြည့်ပါ
အပေါ်ကပုံမှာ ပြထားတဲ့ Point2ခုကို ဇာကနာဖြစ်ဖြစ် မီတာဖြစ်ဖြစ် ထောက်ပြီး usb ကြိုးထိုးလိုက်တာနဲ့ 9008 mode ကို ရောက်သွားမှာပါ
9008 mode ကို ရောက်ပီဆိုတာနဲ့ Huawei Smart-Phone Mutlidownload Software က ရာခိုင်နှုန်းတွေပြေးပြီး ဖုန်းကို Firmware စပီးတင်နေပါပြီ - အောက်ကပုံမှာကြည့်ပါ
တင်နေတဲ့ အချိန်အတွင်း Handset က reboot ကျပါလိမ့်မယ် ၊ Firmware တင်တာ ၁၀၀% နှုန်း ပြည့်ပီဆိုတာနဲ့ ပါဝါဖွင့်ရင် factory လို့ပဲပြနေလိမ့်မယ် dload နဲ့ ထပ်ရေးရပါမယ် EXE Folder ရဲ့  05+f+¦¦µ¦+ Folder--> SD+¿+²+¦¦n Folder ထဲကပါတဲ့ dload နဲ့ရေးလိုက်ပါ firmware တတ်လာပါပြီ boardfirmwareကြီးကိုမကြိုက်ရင် ထပ်ပြီးတော့ မိမိနှစ်သက်ရာ buildnumber များကိုအဆင်ပြေပြေရေးနိုင်ပါပြီ
ကျွန်တော်ကတော့ Official Firmware （G730-U30,Android 4.3,Emotion UI,V100R001CHNC17B133) ကို ပြန်တင်ပါတယ်
ဖုန်းပါဝါပြန်တက်လာတဲ့အခါကျတော့် Notification Error Theme Error တတ်ပါတယ် Imei လဲ0ဖြစ်သွားပါတယ်
Noti Bar error Theme error Imei error ကို အောက်မှာ ဆက်ကြည့်လိုက်ပါ
G730 U30 Board Firmware တင်လို့ တက်လာတဲ့ Noti Bar error နှင့် Theme Error ကို ရှင်းနည်း
အဆင့် ၁ - ဖုန်းကို Kingroot နှင့် root ဖောက်ပါDownload-Kingroot 4.9.5
( Root explorer လဲသွင်းပါ )
အဆင့် ၂ - G6-U00 Sim one repair ကိုဒေါင်းပြီးဖြည်လိုက်ပါ G6-U00.bat ကို run ပါ Type 1 နဲ့2ရွေးခိုင်းပါလိမ့်မယ် Type 1 ကိုရွေးပေးပါ ဖုန်း restart ကျသွားပါလိမ့်မယ် Download-G6-U00 SIM ONE REPAIR.7z <-- G6 U00 SiM One REpair က G730 U30 မှာလဲရပါတယ်
အဆင့် ၃ - ဖုန်းပြန်တက်လာရင် Root explore ထဲဝင် cust ထဲဝင် unicom ကို channel လို့ပြောင်း၊ channel ထဲထပ်ဝင် cn ကို mm လို့ချိန်း ပြီးရင် factory reset ချ ပြန်တက်လာရင် NotiBar တွေ Theme error တွေရှင်းပါပြီ
G730 U30 IMEI Repair
အဆင့် ၁ - Phone Dialer ထဲကနေ *#*#2846579#*#* ရိုက်လိုက်ပါ Project Menu -->Background Setting-->Qualcomm background open setting -->background open ဖြစ်နေရင် အဆင့် ၃ ကို ဖတ်ပါ
အဆင့် ၂ - background closed ဖြစ်နေတဲ့သူကတော့ Download-Background setting one click open.7zBackgroud setting one click open ထဲက ATY.bat ကို run ပေးပါ
အဆင့် ၃ - Phone Dialer ထဲကနေ *#*#2846579#*#* ရိုက်လိုက်ပါ Project Menu -->Background Setting-->Usb ports setting-->Manufacture mode ကိုရွေးပါ ဖုန်းကို usb ကြိုးထိုးပြီး PC နှင့်ချိတ်ပါ QUALCOMM SPECIAL TOOL BY ZS_MALIK Tool ကို run ပီး ကိုကြိုက်တဲ့ IMEI ရိုက်ထည့်ပီးချိန်းပေးလိုက်ပါ Phone restart ကျရင်ရပါပြီ Download-QUALCOMM SPECIAL TOOL BY ZS_MALIK
အခက်အခဲတစ်စုံတရာရှိခဲ့သော် 09 976 0909 84 သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Comment Box မှလည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်
Credit to https://mmtechzone.blogspot.com/